ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စက်မှုတက္ကသိုလ်ဘောလုံးပွဲများ.....(၃) (နိဂုံး)”
ကျွန်တော် ဖတ်နေတာ မစန္ဒာရဲ့ ဂျီဟောသူ ။ ဆက်ရေးပါအုံး။ ဘောလုံး ပြီးရင် အဆောင်သူတွေ အကြောင်း ရေးပေးပါအုံး။
တို့ electronics ကွ
ဒိုင်းရပြီ။ ချန်ပီယံဖြစ်ပြီ။ ကျန်တဲ့မေဂျာတွေ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။ ဟဲဟဲ
October 18, 2008 at 9:39 PM
လွတ်သွားတာနာတယ်… အဲဒီတုန်းကသာ ကျောင်းမှာရှိနေသေးရင် မျက်နှာလေးခပ်မော့မော့နဲ့တခြားမေဂျာအခန်းတွေ ရှေ့ ကဖြတ်လျှောက်… LCRနဲ့ ကန်တင်းမှာ ဘောလုံးပွဲအကြောင်း မရောက်ရောက်အောင် စကားစ… သိပ်အရသာရှိမှာ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုပေါပြန်ရေးပြတော့လဲ အနိုင်တွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်သွားရော…ကလေးစိတ်မကုန်သေးတာလေ…ကိုပေါအရင်က ရေးပြသလို မေ့လောက်တဲ့အခါကျတော့ မေဂျာစွဲတွေပျောက်ပြီး လည်ပင်းပြန်ဖက်ကြတာပဲမိုလား…သူမတူအောင် ညီညွတ်ကြတာပဲမိုလား…ကိုပေါရေ… ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုကိုလဲ လွမ်းတယ်… စိန်ရတုမှာ ဧည့်သည်အနေနဲ့ သာ နွှဲခဲ့ရတာလဲ ၀မ်းနည်းမိတယ်… ဒီလိုမှန်းသိ စာမေးပွဲကျအောင် ဖြေခဲ့တယ်…တကယ်…
October 18, 2008 at 10:55 PM
ကိုပေါလဲ ဘောလုံးပွဲ အတော်ဝါသနာပါပုံပဲ။
သဘောကျတယ်ဗျာ။ အဲဒီခေတ်ကို ပြန်လိုချင်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ၇ပ်ကွက်ပဲတွေလောက်ပဲ မှီခဲ့တာ။
ကိုစိုးထွန်း အကြောင်းလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတာ၊ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ အခု အနှစ်၂၀ကျော်ကြာတဲ့ အထိ စစ်အာဏာရှင်ကို ဘ၀တွေ စတေးခံပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲ ဆိုတာ ပြောပြ လိုက်တာပါပဲ။
လွတ်လပ် ပွင့်လင်းတဲ့၊ ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့၊
မေဂျာချစ်စိတ်လေးတွေကိုယ်စီ နဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ကိုခေတ်တိုင်းမှာရသင့်တယ်။
တက္ကသိုလ်ဆိုတာ စာတစ်ခုထဲသင်ပေးတဲ့ ၃လပြတ်ကျူရှင်တစ်ခုမှမဟုတ်ပဲကိုး..နော
October 19, 2008 at 7:38 AM
မှတ်မိသလောက် ကိုစိုးထွန်းက တစ်ခါမှအတွင်းရေးမှုးမလုပ်ခဲ့ဘူး။
ကိုသူရိန်ပါ။ မှတ်မိပါသေးတယ်။ အားလုံးတော့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှယ်ဘူးသီးကြော်ခဲ့ကြတာလေ။ ဘူးသီးကြော်ဆိုပြီး လိမ်ရာင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှယ်ဘူးသီးဆိုပြီးပြောရောင်းတာပါ။
ရှယ်ဘူးသီး = ဂေါ်ရခါးသီး
ဆွေမာဆိုတာ ပုသိမ်က မဟုတ်လား။ ကျမညီမလေးသူငယ်ချင်းပဲ။
ခုသူက ဆက်သွယ်ရေးမှာ အလုပ်ဝင်နေတယ်လေ။
အတင်းဆွဲ ပြီး ဆွေမျိုးစပ်မိနေတာ ဟိ။
မှန်ပါ့။ မှန်ပါ့။ ပုသိမ်က ဆွေမာပါဘဲ။ အရမ်းပျော်တတ်တယ်။
၄ မှတ်နဲ့ ကပ်လွဲ ခဲ့ရတဲ့ အာအိုင်တီက လူတွေကို အမှန် မနာလိုဘူးဗျိုးးးးး
Very nice post. It reminds me those golden days, football tournament, Ygn university jubilee activities. Yes we used to say about YIT buddhism society's buu-thee-kyaw. ha haa. One thing you forget to mention is about the photographer and the photos taken in the final football match. Actually we don't have any live photo of that big day for all EC because of the funny photographer. He didn't set the film roll properly in the camera and even no single shot was recorded in that camera. Very funny. All the football players, teachers and pepople were givingalot of poses but not recorded in the film. Only photos from the semi-final match with EP were left. You know, most of the players went back to the field and took photos in later date for their achievement. Do you know that photographer and where is that stupid camera? I can give youahint. :-)
Person-in-Charge for Sports in SEES.........
Hey, Sound like very familiar with that photograph episode. But my memory failed me. Could you give me some hints, pls?
ခင်ဗျားရေးထားတာတွေ ပြန်ဖတ်ပြီး အဲဒီဘောလုံးပွဲကို ပြန်တောင်လွမ်းလာတယ်ဗျာ..။ ဆွေမာ ဂျီဟောအဆောင်ပေါ်ကနေ ကွေးနေအောင် ကတာ.. အခုထိ မျက်စိထဲက မထွက်ဘူး..။
You can ask Ko Saw Min Naing, goalkeeper or NaVaNa, the Captain or Moe Hein. They may have one photo taken at U Soe Lwin's restaurent or Nway Aye (not sure) after the EC team won over the EP at the semi-final. The crazy photopragher was in that photo. He is not Thein Soe (now in teacher at Lucky Brid, Ygn), who brought Kyaw Min to train our EC team at that year.
Gosh ! I remember that episode so well.. ha ha ha... the photographer is in Singapore!
miss old days!
Hello Ko Paw;
It would be great if you could administeranew blog for our teachers and RIT experiences that every ex-RIT students can post as well. For example, we had many smart teaching guru like Saya U Tha Hlaing. You was so funny and passion in those old days I remembered, and you can makealot of stories.
btw-သီတင်းကျွတ် လဆန်း ၁၄ရက်နေ့ မွေးတယ်လား။
ဒီက လဆန်း ၁၃ရက်နေ့ မွေးပါ၏။